चार एआईजीका लागि १० जना डिआईजीबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं। गृह मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ५ जना एआईजीको दरबन्दी रहने निर्णय गरेपछि प्रहरीमा तरंग छाएको छ । प्रहरीमा ५ एआईजी मात्र राख्ने गरी तयार पारिएको ...
१३ करोड ठगेर एसएसपीबिरुद्द उल्टै उजुरी, गृहमन्त्रीले किन भेटे ठगलाई ?
काठमाडौं। विभिन्न ब्यक्तिसँग १३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम ठगी गर्ने अनिल गजमेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकक्षमै पुगेका छन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउनेदेखि सुन तस्करीको जा ...
सुन तस्करी र डलरको अवैध कारोबार रोक्न चिनियाँ पक्षसँग गृहमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले चीन नाकाबाट सुन तस्करी र डलरको अवैध कारोबार भइरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहयोगको आग्रह गरेका छन् । नेपालका ल ...
धरौटीमा छुटे व्यवसायी सुधिर बस्नेत
काठमाडौं। घर जग्गा व्यवसाय र सहकारी बचतकर्ताको १० अर्व ठगी प्रकरणमा जेल चलान भएका सुधिर बस्नेत धरौटीमा रिहा भएका छन् । डिल्लीबजार कारागारको थुनामा रहेका बस्नेत सोमबार धरौटीमा रिहा भएका ह ...
'रिप' र सुन काण्डले एसपी बढुवामा पछाडि परे पन्त र राठौर
काठमाडौं । डिएसपीबाट एसपीमा बढुवा हुँदा कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु किन अगाडि परेनन् भन्ने बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ । कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु आईजीपीले कम नम्बर दिएर आफूहरुलाई ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बनेपादेखि बर्दिबाससम्मको विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधनलाई सञ्चालन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले वि ...
सट्टेबाजीका एजेन्ट छुट्दा प्रहरीको मनोवल गिर्यो
काठमाडौं । म्याच फिक्सिङ अर्थात ‘अनलाइन जुवा’ खेलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी अन्जन केसीसहित ५ जना दुई सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुटेका छन् । सट्टेबाजीका नाइके ...
काठमाडौं । ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्व डिआइजीद्वय हेमन्त मल्ल र रमेश खरेलले एसएसपी दिवेश लोहनी,डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सन्जेल ...
सुन काण्ड : डा. डेविटले पनि गरे आत्मसमर्पण
२०७५ जेष्ठ २० गते
काठमाडौं । सनम शाक्य हत्या र तस्करीको ३३ किलो सुन प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका डा. डेविट भनिने छिरिङ वांगेल घलेले जिल्ला अदालत मोरङमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। छिरिङले आइतबार अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका ...
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री दानबहादुर शाहीको निधन भएको छ । ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज विहान उनको निधन भएको हो । शाहीको पारिवारिक स्रोतका अनुसार ७६ वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान ७ ब ...
यस्तो छ प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटी गठनको मापदण्ड
काठमाडौं । प्रदेश र जिल्ला संगठनमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरुमात्रै रहने गरी कमिटी बन्ने छन् । प्रदेश कमिटी कम्तिमा १५१ सदस्यीय हुने छ । जिल्ला कमिटी भने न्यूनतम कम्तिमा ७५ सदस्यीय हुने छ । तर, प ...
दाङ । पाँच नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजी शेरबहादुर बस्नेतले प्रहरीको कामलाई स्वच्छ,जनमैत्रि र पारदर्शिता बनाउने आफ्नो मुख्य उदेश्य रहेको वताएका छन् । माइ न्युजनेपालसँग कुरा गर्दै डिआइजी ब ...
पूजाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान, झुटको प्रपञ्च रच्दै मेनुका
काठमाठौं । सामूहिक बलात्कारबाट पीडित रक्षा नेपालमा आश्रित किशोरी पूजा बोहोराले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले भोगेको पीडा र यातनाको पोल खोलेपछि संस्थाकी अध्यक्ष मेनुका थापाले आफूलाई चोखो स ...
बस दुर्घटना : मृतकको संख्या १३ पुग्यो, १२ जनाको सनाखत, १४ जना घाइते (अपडेट)
काठमाडौं । पाल्पाको तानसेनबाट रामपुर जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेकाे संख्या १३ पुगेकाे छ भने १२ जनाकाे सनाखत भएकाे छ । दुङर्टनामा परी १४ जना घाइते भएका छन् । लु १ ख ९७५ नम्बरक ...
बोक्सीको आरोपमा राधालाई निर्घात कुटपिट गर्ने भोलेबाबालाई पाँच वर्ष जेल सजाय
धनगढी । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ देउकलियाकी राधा चौधरीमाथि बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट गर्ने भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरीलाई पाँच वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको फैसला ...
काठमाडौं । सामाजिक संस्थाको रुपमा परिचित रक्षा नेपालको आश्रयमा पुगेका बालबालिकामाथि चरम अन्याय र अत्याचार भएको पीडितहरुले बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पुजा बोहोरा ‘नाम परिव ...
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवैध विज्ञापनका बोर्ड हटाउन पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले दिएको निर्देशन पनि पालना भएको छैन । मन्त्री अधिकारीले जेठ ३ गते व ...
आश्रय दिएका बालबालिकामाथि रक्षा नेपालको शोषण, पीडितलाई निकालेर उल्टै प्रहरीमा उजुरी
काठमाडौं । रक्षा नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले संघ संस्था ऐन विपरित काम गरिरहेको खुलासा भएको छ । संस्थाकी अध्यक्ष मेनुका थापाले प्रहरी र प्रशासनको कुनै पत्र र सिफारिस विना नै बालबालिका राख्न ...
काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूतावास लैनचौरको प्रेस इन्फर्मेसन कल्चर वीङ्ग्स (पिआइसी)की प्रमुख रुबी जसप्रित शर्माको पूरा अवधि काम गर्न नपाउँदै सरुवा भएको छ । शर्माको सरुवापछि उक्त पदमा अभय ...
घुस काण्डमा दरवारमार्गका डिएसपी मल्ल अनुसन्धानमा तानिँदै
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुससहित प्रहरी नायव निरीक्षक वीरेन्द्रबहादुर ऐडीलाई पक्राउ गरेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त दरवारमार्गका डिएसपी दानबहादुर मल्लको कमाण्डमाथि नै प ...
झापा । भन्सार छली र तस्करी नियन्त्रण गर्न एक नम्वर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआईजी केदार रिजालले कडाइ गर्न थालेपछि प्रहरीले झन्डै १ करोड मुल्य बराबरका सामान बरामद गरेको छ । झापाको काकडभिट्ट ...
काठमाडौँ। गणतन्त्र दिवस २०७५ को उपलक्ष्यमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरिक समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट गणतन्त्र दिवस अंक ...
गोरेको खुलासा: सुन तस्करीमा पैसा लिएर श्याम खत्रीले सहयोग गरे , निरौला र खनालले असहयोग गरे
२०७५ जेष्ठ १४ गते
काठमाडौं । ३३ किलो सुन गायब र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका चूडामणि उप्रेती ९गोरे० ले सुन तस्करीमा प्रहरीसहित ठूलो सञ्जाल क्रियाशील हुने गरेको बताएका छन् । जिल्ला अदालत मोरङका ...
काठमाडौं । नक्कली डाक्टर र पाइलटलाई पक्राउ गरी चर्चा कमाएको नेपाल प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईवी) का प्रहरी नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र काण्डमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अन ...
दलितले दिएको पानी खाँदा गाउँ नै छाड्न बाध्य
बाजुरा । बाजुराको दुर्गममा रहेको हिमाली गाउँपालिका–२ मा बसोबास गर्दै आएका जयलाल बुढाका दम्पतीले दलितको हातको पानी खाएको भन्दै गाउँलेले पीडा दिने गरेकाले सो पीडा सहन नसकी गाउँ छाडेका छन् । वर्षो ...
काठमाडौं। सुन तस्करीमा हुन्डी कारोबारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको पाइएको छ । यस्तो कारोबारमा नेपाल, दुबई र भारतका ठूला व्यापारी, गुन्डा नाइके एवं पेसेबर डाँकाको समेत मुख्य भूमिका रहने गरेको सुन ...
बुहारीलाई करणी गर्न खोज्ने संसदका श्रीमान पक्राउ
वीरगञ्ज । सांसद् शेख चाँद ताराका श्रीमान् शेष मन्सुर बाबुले नाताले बुहारी पर्ने एक महिलालाई जबर्जस्ती करणी गर्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । कानुन व्यावसायीसमेत रहेका शेष मन्सुरलाई बुहारीमा ...
मध्यराति महेन्द्रको शालिक भत्काएपछि...
स्याङजा । स्याङजा जिल्लामा डोजर प्रयोग गरेर राजा महेन्द्रको शालिक भत्काइएपछि स्थानीयबासी विरोधमा उत्रिएका छन् । सिदार्थ राजमार्गअन्तर्गत पुतलीबजारमा रहेको राजा महेन्द्रको शालिकलाई नगरपालि ...
सुन काण्ड : समितिको सूचिमा नरहेका व्यक्ति पक्राउ, तस्करीको पैसा संसदलाई चुनाव खर्च
विराटनगर । सनम हत्याकाण्ड र तस्करीको साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् । ‘गोल्ड डन’ को छवी बनाएका मोरङ उर्लावारीका चूणमणी उप्रेती उर्फ गोरे सँग कनेक्सन भएका नेपाल क ...
काठमाडौं । चलचित्र निर्माता संघले नक्कली नेपाली रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका फिल्म निर्माता एवम् वितरण माधवराज वाग्लेलाई बचाउन चलखेल सुरु गरेको छ । विशेष गरेर निर्माता संघका महासचिव सरोज थापा उर्फ ...
सुन तस्करी र सनम हत्या प्रकरण : डिएसपीले यसरी फसाए निर्दोषलाई (प्रमाण सहित)
काठमाडौं । सनम शाक्य हत्या र तस्करीको साढे ३३ किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न गठित गृहमन्त्रालयको समितिले पक्राउ गरी थुनामा पुगेका अभियुक्त नै नक्कली भएको तथ्य बाहिर आएको छ । यो घटना बाहिर आएसँगै ...
काठमाडौं। वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलले सन् २०१२ र १३ मा तयार पारेको तथ्यांकअनुसार भारतमा प्रत्येक वर्ष ८ सयदेखि ९ सय टन सुन खपत हुन्छ । त्यसमध्ये १ सय ४० देखि १ सय ६० टन सुन तस्करीबाट पूर्ति हुन्छ । ...
सडकमार्ग हुँदै कसरी र कसले काठमाडौं भित्र्यायो ‘गोल्ड डन’ गोरेलाई ?
काठमाडौं । सनम शाक्य हत्या र साढे ३३ किलो सुन तस्करीको छानविनमा महानगरिय अपराध महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख दिवेस लोहनी र महाशाखाकै केही प्रहरी अधिकारीहरुको भूूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयल ...
काठमाडौं । सनम शाक्य हत्या र साढे ३३ किलो अवैध सुन तस्करीका मुख्य आरोपी ‘गोल्ड डन’ चूूणमणी उप्रेती उर्फ गोरेलाई आजै मोरङ पुर्‍याइएको छ । गृह मन्त्रालयको विशेष छानविन समितिले आज विहान ...
'गोल्ड डन' गोरे पक्राउ पर्दा क–कसको निद हराम ?
काठमाडौं । सनम शाक्य हत्या र साढे ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य आरोपी ‘गोल्ड डन’ चूडामणि उप्रेती उर्फ गोरेलाई गृहमन्त्रालयको विशेष छानबिन समिति अन्तरगत खटिएको प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेसँगै ...
राष्ट्रपतिलाई नयाँ राजाको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो ?
काठमाडौं। सरकारले जननिर्वाचित सार्वभौम संसदलाई अपमान गरेको प्रसङग हिजो संसदमा प्रवेश गरेसँगै हिजो सरकार प्रमुख तथा संसदको प्रमुखको पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ। गणतन्त्र स्थापना भएप ...
सुन तस्करी काण्ड: समितीको म्याद थपियो, गोरे र सुन अझै फेला परेनन्
२०७५ जेष्ठ ७ गते
काठमाडौँ। सरकारले ३३ किलो सुन काण्डबारे अनुसन्धान गर्न गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीको म्याद थपेको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टोलीको म्याद जेठ मसान्तसम्म थपेको हो । तर, म्याद थपिए पन ...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त भएसँगै सरुवा र बढुवाका कामहरु धमाधम सम्पन्न भइरहेका छन् । प्रहरीमा संघीय संरचना लागु गर्नका लागि आईजीपी खनालको दौडधुप दिन रात ...
बाबुरामले भने -कमजोर भएपछि मर्ज हुने बैंक झै एमाले र माओवादीबीच एकता भयो
२०७५ जेष्ठ ५ गते
काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले सत्ता र स्वार्थ मिलेर एमाले र माओवादीबीच एकता भएको वताएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र चलाउन नसके ...
यातायात व्यवसायीको प्रभावमा सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका महानिर्देशकको सरुवा
काठमाडौं । यातायात सिन्डिकेट हटाउन विशेष भूमिका निभाएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई मन्त्रालय तानिएका छन् । सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी वाहीवाही कमाएका मह ...
८८ सुन किलो सुनकाण्डका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सनम शाक्य हत्या र साढे ३३ किलो सुन काण्डको छानविन प्रक्रियाले बजार तातिरहेका बेला ८८ किलो सुनकाण्डमा पक्राउ परेका दुई अभियुक्तलाई भने सर्वोच्चले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला र तत्का ...
मेट्रो वानमा डिआईजी न्यौपानेलाई पठाउने तयारी, नयाँलाई प्रदेशमा खटाइने
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा बढुवा भएका एसएसपीहरुले आज डिआईजीको फूली लगाउँदै छन् । उनीहरुलाई केही दिन भित्रै पोस्टिङको जिम्मेवारी दिने गृहको तयारी छ । स्रोतका अनुसार उनीहरु ...
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यापारी सुवास श्रेष्ठले एयरलाइन्स विभाग प्रमुख तथा विमानस्थलका प्रवत्ता रहेका प्रेमनाथ ठाकुरसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा कफी सप सञ्चालन गर्दै ...
२ करोड ६० लाख नक्कली रुपैया सहित फिल्म निर्माता पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले फिल्म निर्माता माधव वाग्लेसहित ६ जनालाई २ करोड ६० लाख नक्कली नेपाली रुपैया सहित पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले वाग्लेसहित महेन्द्र वोगटी, सुजित तामाङ, साजन तामाङ, प्रकाश सुवेदी, व ...
काठमाडौं । वास्तवमा भन्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका नाम मात्रको राजधानी र महानगरपालिका हो भन्दा फरक नपर्ला । उपत्यकामा जताततै फोहोर, धुलो र हिलोमात्र देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन राजधानी जस्तो ठाउँका सार्व ...
काठमाडौं। विराटनगर महानगरपालिका–१२ मा आठ वर्षदेखि भारतीय दूतावासको फिल्ड कार्यालय अवैध रूपमा बसिरहेको छ । ०६५ मा आएको कोसी बाढी प्रकोपले उत्पन्न व्यापारिक समस्या सहजीकरणका लागि स्थापना भए ...
अख्तियारद्वारा सुन काण्डको समितीमा रहेका डिएसपीमाथि नै चोरी गाडी काण्डमा छानविन
काठमाडौं । सुन काण्डमा सरकारले गठन गरेको छानविन समितिका एक सदस्यमाथि नै चोरी गाडी र अकुत सम्पत्ति प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको रहस्य खुलेको छ । विवादित डिएसपी सुद ...
भोलीसम्म वर्षा जारी रहने मौसमविदहरुको भनाई
काठमाडौं । राजधानीलगायत आसपासका क्षेत्रमा आइतबार दिउसोदेखि परेको बर्षा अझै केही दिन जारी रहने मौसमविदले बताएका छन् । अविरल वर्षाका कारण रामेछापको मन्थली अस्तव्यस्त बनेको छ भने बाढिमा परिन कक्षा ११ कि ...
ज्यान मार्ने उद्योगका फरार अभियुक्तलाई उन्मुक्ती दिन अदालत र प्रहरीमा चलखेल
२०७५ बैशाख ३० गते
तनहुँ। राजनीतिक दबाब र प्रहरी कै मिलेमतोमा आपराधिक घटनामा संलग्न रहेका फरार अभियुक्तलाई उन्मुक्ती दिन चलखेल बढेको छ। टोले गुण्डाहरुको ग्याङ् फाइट भइरहने तनहुँमा सुरक्षा चिन्ता समेत वढेको छ । तन ...
२०७५ बैशाख २९ गते
काठमाडौं । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज मुक्तिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजाअर्चना गरेका छन् । बिहानै मुक्तिनाथ पुगेका मोदीले विधि र परम्पराअनुसार झण्डै वीस मिन ...